AvaTrade Bonus - David Bonus Welcome
A umthengisi ulawulwa bathembela - 10 iminyaka & 150 amazwe
Award-lokuwina nomthengisi ezintsha - best amabhaso broker
Ixhomekeke ku $10,00 bonus
Kuqala ku 0.8 iipete
Khangela Out AvaTrade Ibhonasi yethu Latest Review 2018!
Ngaba wonwabile kunye broker yakho forex? Siyakumema ukuba ufunde kwakhona yethu yakutsha nje ye AvaTrade. Ngubani owaziyo, ukuze utshintshe ingqondo yakho uze uqiniseke ukuba bayeke.
AvaTrade yasungulwa 2006 liqela leengcali shishini owayefuna ukuxhobisa abantu abaninzi ukuya urhwebo forex. umbono wayo umsebenzisi-zijolise iye yanceda amafutha nokukhula kwayo kakhulu; okwangoku it has ezinye 20,000 Abarhwebi ebhalisiweyo abaqhuba ngaphezu Programmes kwezigidi ezibini ngenyanga, kunye nemiqulu zokurhweba ogcweleyo ngaphezulu $60 billion ngenyanga.
Ulwazi AvaTrade Customer inkxaso
Ukuqinisekisa ukuba zinika umthengi best, AvaTrade inika ngeendlela ezahlukahlukeneyo ukuba uqhagamshelana nabo. Ungakwazi ukuqala ingxoxo live nge arhente nenkxaso, ukuthumela i email evela kwisiza okanye utsalele amanani ngamazwe, leyo ziyafumaneka phantse kuzo zonke kwilizwekazi. Kukwakho umgca ngamazwe kwakunye nenombolo yefeksi. iilwimi ezininzi ezixhaswa kuquka Chinese, IsiFrentshi, Spanish, IsiArabhu, Italian and German.
AvaTrade Trading Ulwazi Akhawunti
Kukho iindidi ezintathu akhawunti ukuba unako ukuvula kwi AvaTrade. Le akhawunti Silver ifuna ubuncinane $100 ngotyalo kubandakanya nenzuzo ezifana nokufikelela kwimithombo zemfundo, kuquka iindaba market live kunye umhlaziyi akhawunti eziphezulu, lo gama i-akhawunti Gold ifuna $1,000 wediposithi kwaye kuquka imiqondiso yemihla ngemihla kunye nocazululo kwiimarike zorhwebo i-broker xa central. Le akhawunti Platinum ufuna $10,000 wediposithi kwaye kubandakanya ukufikelela kwigumbi ukuphatha ngqo. Ipremiyamu Ava Khetha akhawunti kudinga $100,000 wediposithi kwaye ilungelo ukuba iimeko zoshishino nezimo.
Uyacelwa kwakhona banelungelo ukuseta i-akhawunti demo ekuvumela ukuba urhwebe $100,000. Le akhawunti likuvumela ukuba wenze abathengisa iphepha ngaphandle kokuba abeke imali yokwenene 21 iintsuku, ukuze uwazi eqongeni zokurhweba balole izakhono lakho lorhwebo.
AvaTrade Trading Iimpawu
Kuba kakhulu ngababini lwemali, AvaTrade inika eqhinga of 400:1 kwaye ifuna esima 0.25% abo besebenzisa iqonga MetaTrader kunye 200:1 ulawulo oluxhathisayo kwaye a 0.50% imajini for abarhwebi ngokusebenzisa platform AvaTrader. Sandile fixed isusela ku 3 iipete ngokuba ngababini lwemali kakhulu wasebenza ezifana EUR / GBP kunye EUR / USD ukuya kangangoko 250 iipete for ngababini bumane efana EUR / ZAR. Ubukhulu Ubuncinane urhwebo ngama yi 1,000 units.
Unalo ukhetho yokusebenzisa i MetaTrader ethandwa 4 iqonga zorhwebo okanye iqonga AvaTrader kuphela, elivumela ukuba lokuthengisa ngaphezu 200 iimpahla kwanda ephantsi esisigxina kunye nokufikelela uluhlu lwezixhobo yatshati ntlobo ukuze.
Uphawu ngokubhengezwa AvaTrader app entsha mobile, isiza inikeza ibhonasi bamkelekile efikelela kwi $300 abo baza kwenza idipozithi yokuqala ubuncinane $500 ukuba $1,000. Abo idiphozithi $3,000 ixhomekeke ku $10,000 unelungelo nje kuphela ibhonasi bamkelekile efikelela kwi $1,500 kodwa a simahla yakutsha ifowuni ephathwayo.
2 kuphendulwe “AvaTrade Bonus”
EyeKhala 5, 2017 e 2:08 pm
In AvaTrade wafumana ibhonasi, I uyifumana ukongeza ukukhuthaza imfundo. Oko bendikunye nabo kwi-ofisi e Warsaw, enye nkampani ezimbalwa, loo nto e Cyprus okanye kwezinye ,,amathuba okuxoxa”- nalowo wamkela forex uyazi izinto endinibhalela. Kananjalo kryptowaluty, akhula ethandwa kakhulu ngoku. zomculo cool, Uyakwazi ukwenza inzuzo cool. On the endlala zisasuka. Kunye nokungabikho kwentlawulo ngoko nangoko – kufuneka ulinde 5 iintsuku.
Enkosi ngempendulo yakho ngokunyaniseka 🙂